Xusuusin 7 Milkiileyaal ah oo Kuuriyada Koonfureed ka Bilaabay Dacwad Heer Koowaad ah Wararka IPhone
Milkiilayaasha Galaxy Note 7 waxay bilaabeen ugu horreyn dhowr dacwadood oo ficil ah oo ka socda Koonfurta Kuuriya
Dacwadda ugu horreysa ee dacwada oo ku socota wakiil 527 Galaxy Note 7 iibsadayaashu waxay dalbanayaan qiyaastii $ 440 qofkiiba dhibaatada xagga bixitaanka iyo ugu dambayntii taleefanka oo la waayo. Shirkada sharciga ee dacwada fulineysa ayaa sheegtay inay "qorsheyneyso inay bil kasta dacwad gudbiso."
Dhibaatadu waxay tahay in milkiilayaasha Xusuusin 7 kaliya aysan ahayn inay ku laabtaan dukaamada dhowr jeer, sidoo kale Markaad soo degsaneyso softiweerka, waxay xaddideysaa batterigaaga boqolkiiba 60 awoodda isticmaalka caadiga ah ee qalabka.
Shirkaddu waxay sheegtay inay heshay saddex cabasho oo ka timid dadka taleefannadooda ay dab qabsadeen, kuwanna waxay ku milmeen sheegasho gooni ah.
Samsung ayaa Isniinta soo bandhigtay bandhig loogu talagalay Kuuriya taas oo ah dadka Note 7 ku badalanaya Galaxy S7 ama S7 Edge waxay u yeelan doonaan qiimo dhimis Galaxy S8 ama Note 8, midkoodna aan si rasmi ah loo shaacin. Gaar ahaan, dadku waxay kaliya bixin doonaan kalabar kharashka S7 si loo helo aaladda 2017.
Barnaamijku wuxuu sidoo kale gaari karaa dalal kale, Samsung ayaa tiri, iyadoo aan bixin faahfaahin dheeraad ah. Gobollo badan shirkaddu waxay siineysay lacag celin ama isdhaafsi, xaaladaha qaarkood deyn dheeraad ah oo loogu talagalay helitaanka shey kale.
The Wall Street Journal ayaa sheegay Axadii Samsung waxay wali isku dayeysaa inay ogaato waxa sababay dabka Note 7, isagoo qiraya in dhibaatada lagu ogaaday inay batteriga la xiriirto kaliya markii dib loo soo celiyo la codsaday. Shirkadda xitaa waa la soo sheegayaa dib u dhigista horumarinta Galaxy S8 laba toddobaadmaaddaama injineeradu ka shaqeeyaan "meydka meydka" ee Xusuusta 7.
Samsung ayaa lagu soo waramayaa inay meesha ka saartay qisooyin qaar oo ka mid ah dabka Note 7, laakiin markii dambe waxay go aansatay inay si dhakhso leh wax uga qabato ka dib markii ay cadaatay inay dhibaatadu culus tahay, halkii ay ka samayn lahayd baaritaan buuxa. Tani waxay keentay dib u soo celinta qalabka oo kireysato batteri-qeybiye cusub, taas oo aakhirkii wax ka tari wayday xallinta wax kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Milkiilayaasha Galaxy Note 7 waxay bilaabeen ugu horreyn dhowr dacwadood oo ficil ah oo ka socda Koonfurta Kuuriya